LEGO 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
20 / 08 / 2020 24 / 08 / 2020 ဂရေဟမ် 2779 Views စာ0မှတ်ချက် 18 +, 2020, 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်, Lego, Lego Nintendo, Lego စူပါမာရီယို, Nintendo, စူပါမာရီယို
လွမ်းဆွတ်မှုထက်ပိုပါတယ် Lego 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်တည်ဆောက်ရတာအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတာကလေးစားစရာကောင်းတယ်။
အဆိုပါ Lego အုပ်စု partဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ Nintendo နှင့်အတူ nered အသစ်အစုံ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က စူပါမာရီယို ရလဒ်၏ရလဒ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာသောကြီးမားသောပစ်လွှတ်ဖြစ်ခြင်းဆောင်ပုဒ်။ ထိုထုတ်ကုန်လိုင်းသည်နည်းပညာနှင့်ရိုးရာများကိုပေါင်းစပ်ရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသည် Lego အဆောက်အ ဦး တည်ဆောက်ခြင်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိသတ်များအလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာထိုပူးပေါင်းမှုမှထွက်ပေါ်လာသည့်အခြားအရာလည်းရှိသည်။
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင် NESO - Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်မှရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်အားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။ မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးအတွက်၎င်းသည်ရာသက်ပန်အမှတ်တရများကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးအများစုမှာစူပါမာရီယို Bros ကစားခြင်းဖြစ်သည်။ အိပ်ခန်း၏ထောင့်တွင်ထိုင်နေသည့်ခလုတ်ခုံ၏ပုံသဏ္Evenာန်ပင်အမြစ်စွဲနေသည်။ In 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ်၏ပရိသတ်များ classic အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလိုလိုကျလှတဲ့အလိုအလျောက်ပျော်မွေ့နေစဉ် console သည်သူတို့၏ကလေးဘဝကိုပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်သည် Lego အဆောက်အဦ။
theme: Lego Nintendo အမည်သတ်မှတ်မည် - 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ် ဖြန့်ချိ: သြဂုတ်လ 1
စျေးနှုန်း: £ 209.99 / $ 229.99 / € 224.19 အပိုင်းပိုင်း: 2646 အသေးစားပုံများ: 0
Lego: ယခုရရှိနိုင် အမေဇုံ: LEGO သီးသန့်
၏နောက်ဆုံးရာသီကာလအတွင်း Lego MASTERS Australia၊ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့သည် 1: 1 စကေးဖြင့်အစစ်အမှန်ဘဝအရာဝတ္ထုများကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်တာ ၀ န်ပေးခဲ့သည် Lego ဒြပ်စင်။ နောက်ဆုံးတွင်တည်ဆောက်သူများယုံကြည်စိတ်ချရသောပုံတူများပေါ်ထွက်လာချိန်တွင်၊ p သည် p ကိုသာအသုံးပြုသည့်အခါထောင့်၊artအတွင်းတည်ရှိသည် Lego စနစ်။
၎င်းသည်မည်မျှလှည့်စားသည်ကိုသိခြင်းသည်လုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်စေသည် Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ဤတွင်အားလုံးအထင်ကြီးအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဒါဒါ Lego NES သည်တကယ့် console နှင့်တူညီသည်။ ၎င်းသည်ခိုင်လုံသောပုံစံဖြင့်ပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာလုံးဝနီးပါးမျှမမြင်နိုင်သောအရာများဖြစ်သည် - ဤအရာသည်တရား ၀ င်ပစ္စည်းများမဟုတ်ဘဲပန်ကာမော်ဒယ်များတွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများဖြစ်သည်။
- တည်ဆောက် -
အကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာ 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ် ဒါဟာတည်ဆောက်စရာအထင်ကြီးစရာကောင်းပြီးရှုပ်ထွေးပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောမော်ဒယ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ NES ကိုယ်နှိုက်နှင့်ခေတ်နောက်ကျသောရုပ်မြင်သံကြားစက်ရှိသည်၊ ၎င်းတို့နှစ်ခုလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ လမ်းညွှန်စာအုပ်နှစ်ခုဖြင့် st တွင်ရွေးစရာရှိသည်artတစ်ခုခုနှင့်အတူ ing - ဒါပေမယ့်အိတ်နှင့်ခြေလှမ်းနံပါတ်များကို console ကိုသူ့ဟာသူပထမ ဦး ဆုံးလာသည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အတွက်တိုင်းတစ်ခုတည်း technique ကို Lego playbook ကို NES ၏ပုံသဏ္accurာန်ကိုတိကျစွာဖမ်းယူရန်အသုံးပြုသည်။ ဘေးတိုက်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဇောက်ထိုးအဆောက်အအုံများရှိသည်။ ဖြည့်ထားသောနေရာလွတ်များရှိသေးသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွန်းအား ၁၈+ နှင့်အချို့လူကြီးများပြန်လာလျှင်။ Lego ဒီအစုကတဆင့်, သူတို့ကအတိတ်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအမှုအရာပြောင်းလဲလာကြပုံကိုအတွက် crash သင်တန်းကိုရလိမ့်မယ်။
ဘေးထွက်ဒြပ်စင်များအတွက်နည်းစနစ်အချို့သည်မတူညီသောအရာများဖြစ်သည်။ ဥပမာ - inverted slope အုတ်၏နောက်ဖက်ကို element များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ အပိုင်းအစငယ်များကိုရံဖန်ရံခါဆောက်လုပ်ပြီးနောက်တွင်၎င်းတို့အားပတ် ၀ န်းကျင်အုတ်များကသူတို့ကိုအစဉ်အဆက်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းထက်၎င်းတို့ကိုထောင်ချောက်မလုပ်မီနေရာတွင်အနားယူသည်။ ဤနည်းစနစ်များကိုတရားဝင်တွင်ရှာမတွေ့ပါ Lego လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသတ်မှတ်။
ပြင်ပကနေချက်ချင်းမသိရပါဘူး Lego NES သည်အတွင်း၌မည်မျှရှိသည်ကိုခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်များပြားလှသည့်နည်းစနစ်များကိုပုံဖော်ခြင်းအတွက်သာမကဘဲယန္တရားကိုလည်းအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အစစ်အမှန်ဘဝအရာဝတ္ထုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်မှန်သောခံစားမှုပုံစံဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်အဖုံးသည်၎င်းကိုဖယ်ရှားပေးသည် Lego ဂိမ်းက cartခေါင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တွန်းနိုင်ပါတယ်။ Game Pak ကိုနေရာချထားလိုက်ခြင်းဟာစိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။
NES ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ပြီးနောက် 'wow' အချိန်များကုန်ပြီဟုခံစားရရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါပေမယ့် partController ပေါ်တွင်အသုံးပြုမှုသည်လိမ္မာပါးနပ်သည်။ ၎င်း၏သေးငယ်ပြီးပါးလွှာသောပရိုဖိုင်းသည်တိကျမှန်ကန်စွာထင်ဟပ်နိုင်သည်။ အဓိကဆွဲဆောင်သည်မှာနည်းစနစ်များမြောက်များစွာမပါ ၀ င်သော်လည်းတ ၀ က်လုံး offset များကိုဖန်တီးရန်မသင့်တော်သော်လည်းအလွန်ရှုပ်ထွေးသည့်အရာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးနောက်ရိုးရှင်းသောနည်းစနစ်များသည်လည်းရလဒ်ကောင်းများကိုပြသနိုင်သည်။ က c များအတွက် Dittoartအားလုံးပုံဖော်အကြောင်းကိုသောခေါင်။
မော်ဒယ်တည်ဆောက်ခြင်း၏ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော်၎င်းကိုပရိသတ်များအနေဖြင့်ဤပြသနာကိုမည်သို့ပြသမည်ကိုဒီဇိုင်နာများစဉ်းစားမိခြင်းက ပို၍ အကျိုးရှိစေသည်။ လျှို့ဝှက် micro ကိုထုတ်ဖေါ်ရန်ဘေးထွက် panel တစ်ခုပေါ်လာသည် စူပါမာရီယို Bros. Warp Zone၊ အပေါ်ဆုံးပြားများသည်အတွင်းပိုင်းယန္တရားကိုဖော်ထုတ်ရန်အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်ပြီး၊ Controller ကိုသက်ဆိုင်ရာ port နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ထိုမော်ဒယ်လ်သည်တည်ဆောက်ရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော်လည်းဇာတ်လမ်း၏တစ်ဝက်မျှသာရှိသည်။ ရုပ်မြင်သံကြားသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသော်လည်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်နေဆဲဖြစ်သည် Lego မီးခိုးရောင်သေတ္တာပြီးသည်နှင့်ပညာရေးနှင့်လန်းဆန်းမှုနှုန်းကိုပြောင်းလဲပေးသည်။
st နေစဉ်artမျှမျှတတရိုးရာကနေ s ကို Lego ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကရုပ်မြင်သံကြားကရုပ်မြင်သံကြားစက်၏နောက်ကျောဖြစ်လာမည့်အခြားအရာတစ်ခုကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသည်။ မာရီယိုကိုသရုပ်ဖော်ထားသောရုပ်မြင်သံကြားရုပ်မြင်သံကြားတစ်ခုဖြစ်မည့်အစားမာရီယိုသည် ၈-bit platformer ကို ဖြတ်၍ ခရီးသွားနေသည်ဟူသောထင်မြင်ချက်ကိုပေးပြီး၎င်းကိုရွေ့လျားနိုင်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဤတည်ဆောက်မှုသည်မျက်နှာပြင်ကိုလှည့်ပတ်သွားလာရန်ခိုင်မာသည့်ယန္တရားတစ်ခုထားရမည်ဟုဆိုလိုသည်။
သေချာတာပေါ့, တည်ဆောက်မှု၏အောက်ခြေလျင်မြန်စွာကြောင်းဘယ်လိုလည်ပတ်လိမ့်မည်ဟုပြသထားတယ်။ နည်းပညာ ဂီယာဂီယာသည်ပြောင်လက်စွာမောင်းနှင်နိုင်သည့်အတွက်ဘေးဘက်မှကပ်ထားသောလက်ကိုင်သည်ရွေ့လျားသည့်မျက်နှာပြင်ကိုလည်ပတ်နိုင်စေပြီးဘီးများပါ ၀ င်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြား၏နှစ်ဖက်ကိုအလျင်အမြန်ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်းစုဝေးနေသောကြောင့်ဤအဆောက်အ ဦး ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းသည်ဤမော်ဒယ်လ်စဉ်အတွင်းဖြစ်သည်။
၏အနုစိတ်သဘောသဘာဝနှင့်အတူခြားနား နည်းပညာ box ရဲ့အောက်ခြေမှာ screen နှင့်၎င်းကိုအပိုင်းပိုင်းအများကြီးချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။ part သူတို့ချိတ်ဆက်စဉ်ကပြုလုပ်သောကြည်နူးဖွယ်ကလစ် နှိပ်၍ ပျော်စရာကောင်းသည်၊ သို့သော် ၁ × ၁ အုပ်ကြွပ်နှင့်ပြားပြားများစွာကိုချိန်ညှိရန်အချိန်ရောက်သောအခါအရာများသည်အနည်းငယ်ပင်ပန်းသည်။ အဓိကအားဖြင့်ယခင်ကတည်ဆောက်ခဲ့သောအဆောက်အအုံနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြောင့်အရာအားလုံးအတော်အတန်မြန်ဆန်စွာတိုးတက်နေပြီးရုတ်တရက်သိသိသာသာနှေးကွေးသွားခြင်းသာဖြစ်သည်။
ရုပ်မြင်သံကြား၏ရှေ့ဘက်တွင်ကောင်းမွန်သော p ၏နောက်ပုံတစ်ပုံဖြစ်သည်artအသုံးပြုမှုနှင့်အသိဉာဏ်နည်းစနစ်။ စပီကာသည်အပြင်ဘက်သို့မျက်နှာချင်းဆိုင် ၁ × ၁ အကွာအဝေးရှိသော်လည်းခလုပ်များအဖြစ်အလုပ်လုပ်သော Droid Head များကဲ့သို့ကောင်းမွန်သည်။ အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးနှင့်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်မှာထိပ်ဆုံးရှိချန်နယ်ချန်နယ်လ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နောက်ကွယ်မှဂီယာကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဒြပ်ထုတစ်ခုကြောင့်အသံလှည့်သောအခါကလစ်နှိပ်သံကိုပြုလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်အသေးစိတ်များထဲမှတစ်ခုအပါအဝင်မလိုအပ်သော်လည်းအသေးစိတ်ကိုရွေးချယ်သည် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
အစုံတွင်ပါ ၀ င်သည့်အထူးဒြပ်စင်တစ်ခုမှာ ၈-bit Mario ဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းသောလှံတံနှင့်ပန်းကန်ဒြပ်စင်နှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ ဒီပန်းကန်ဟာချောချောမွေ့မွေ့ tile မျက်နှာပြင်ကိုထိပြီးပန်းကန်ပြားရှေ့တွင်ထိုင်သည်။ အဆိုပါ crank လှည့်ပြီးတာနဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလှည့်လာပြီးမာရီယန်ကိုပြေးပြီးခုန်ထွက်လာတာကိုတွေ့နိုင်တယ် စူပါမာရီယို Bros. အဆင့်။ ၎င်းသည်လုပ်သကဲ့သို့ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။
ကျေးဇူးတင်စရာကရုပ်မြင်သံကြားသည် 1: 1 သည် console ကဲ့သို့မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၏ Vibe များကိုအပြည့်အဝဖမ်းယူနိုင်ပြီး၎င်းနည်းပညာသည်မည်မျှလျင်မြန်စွာပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုသတိပေးသည်။
ပုံနှိပ်ထားသောအပိုင်းအစများနှင့်စတစ်ကာများကိုဆွေးနွေးရန် ဦး ထုပ်ဟောင်းနေစဉ်၊ Lego စတစ်ကာများကိုတရားမျှတစေရန်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်၎င်းတို့ကိုညည်းညူရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတောင်းဆိုရန်စားသုံးသူများ၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ 71374 Nintendo Entertainment System အတွက်မူအလှဆင်ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည် - စာလုံးများကို align လုပ်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တံဆိပ်တပ်ထားသောတစ်ခုတည်းသောအလှဆင်ခြင်းသည်ဂိမ်း c ရှိသူများဖြစ်သည်artခေါင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏နောက်ကျောအပေါ်တ။
- ဇာတ်ကောင် -
သီးသန့်ဒြပ်စင်တစ်ခုစီတွင် ၈-bit Mario tile ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင်ကျောဘက်၌စုပ်တစ်ခုစီတပ်ဆင်ထားသည့်အတိုင်းအထူးတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်သပ်ရပ်လှပသောအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်ပြီး Super Mario Bros. ဒီဇိုင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော်လည်းဤပုံစံအပြင်ဘက်တွင်အသုံး ၀ င်မှုအနည်းငယ်သာရှိနိုင်သည်။
ထို့အပြင် ၁ × ၁ ဒြပ်စင်များသည် Mari ၏ရန်သူများနှင့်သူ၏စွမ်းအားအချို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Goombas၊ စူပါမှိုနှင့် Red Shells များအားလုံးသည် ၈-bit လွှမ်းမိုးမှုရှိသည့်ပုံစံတွင်ပါဝင်သည်။ အနည်းငယ်သောအပိုပစ္စည်းများပင်ရှိသည်၊ သင်တန်းကိုပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသည့်အပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ တကယ်တော့သူတို့ဟာထုတ်လုပ်မှုမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ Lego အုပ်စုတစ်ခုကမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး DOTS ဤနှစ်သက်ဖွယ် 1x1s ၏စတိုင်အိတ်။
အထူးသဖြင့် scrolling လုပ်ထားသောရုပ်မြင်သံကြားစက်ကို၎င်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်တိုးမြှင့်နိုင်သည် Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း (ပြန်လည်သုံးသပ်) ။ နံပါတ်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်သောမော်ဒယ်၏ထိပ်ပိုင်းမှပန်းကန်တစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်ပြီး၊ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သောမာရီယိုရုပ်ပုံသည်သူ၏ slot ထဲသို့မထည့်မီစစ်ဆေးသည်။ မျက်နှာပြင်လှည့်သောအခါ Mario သည်ကစားလိမ့်မည် classic တေးဂီတနှင့်အရောင်အာရုံခံကိရိယာမှတစ်ဆင့်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကို အခြေခံ၍ စစ်မှန်သောဆူညံသံများပြုလုပ်ပါ။ ဒီ model မှာပါဝင်တဲ့ features တွေလိုပဲဒီဇိုင်းသမားတွေလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်မလုံလောက်သေးပါကစျေးနှုန်းအတွက်သင့်တော်သော ၀ န်ဆောင်မှုထက်ပိုသောအရာတစ်ခုကိုပေးထားသည်။ ဒါဟာလျောက်ပတ်သော p ရရှိပါသည်arts သည်ဒြပ်စင် ၂,၆၄၆ ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းထက်ပိုသည်မှာအတူတကွစုစည်းခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီး၎င်းသည်လုပ်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံသည်စျေးနှုန်းကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စေသည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလုပ်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်ပြီး၎င်း၏အဆုံးသို့ဆွဲဆောင်မှုရှိသော display အပိုင်းရောက်ရှိခြင်းသည်ဤ box မှပေးသောတန်ဖိုးကိုပိုမိုခံစားစေသည်။ ၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အလွန်နှင့်အလွန်ကွာခြားသည် Lego စူပါမာရီယို ယေဘုယျအားဖြင့်စျေးကြီးခံစားရသည့်အစုံ။
- ရုပျပုံမြား -
ဒီပုံစံဟာအထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင်တကယ့်ကိုစံနမူနာတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ပါဘူး Lego ရှေ့ဆက်သွားအစုံ; 1: 1 ပုံတူအဖြစ်မကြာခဏပြုလုပ်ထားသောအရာဝတ္ထုသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သော်လည်းပရိသတ်များသည် NES ကဲ့သို့အထူးရိုသေလေးစားမှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ 1: 1 နှင့်အတူတစ်ခုခုပြန်လည်ဖွင့်နိုင်ဖြစ်ခြင်း၏အသစ်တစ်ခုကို Lego အုတ်တွေမလောက်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ၁၈+ အကွာအဝေးမှာနေရာတခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်ဤအခါသမယတွင်လှပစွာအလုပ်လုပ်သည်။
အဘယ်အရာကိုကပြသနွေးလွမ်းဆွတ်မှုမှတဆင့်အပြုံးဆောင်တတ်၏တဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်ခြင်းထက်သာလွန်မြင့်တက်သောအရာကိုကတည်ဆောက်ခြင်း၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအပျော်အပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလှပတဲ့အလှဆင်မှုအတွက်လုပ်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး၊ Lego နည်းစနစ်များနှင့်အဆက်မပြတ်ဆောက်သူစိတ်ဝင်စား။ ၎င်းတွင်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ထူးခြားသောဆွဲဆောင်မှုကိုထပ်မံတိုးပွားစေသည်။
အဆိုပါပေမယ့် Lego စူပါမာရီယို ဆောင်ပုဒ်အတန်ငယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည် 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ် မဟုတ်ပါဘူး။ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော၊ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံကိုရရှိစေတဲ့မူရင်းအဆောက်အ ဦး အတွေ့အကြုံကိုပေးတယ် Lego ပရိသတ်များနှင့်ဘ ၀ ၌အုတ်ခဲကိုတစ်ခါမျှမထိဖူးသူများပါ။
71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ် မှာမှာယခုရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego Star Wars 75294 Bespin Duel ပစ်မှတ်လာမယ့်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ပြင်ဆင်ထားသည် →